Wararka Maanta: Talaado, Nov 20, 2012-Madaxweynaha Soomaaliya oo Cambaareeyay Qaraxii ay ku dhinteen dadka rayidka ah ee ka dhacay Nairobi
Xasan Sheekh ayaa tacsi u diray ehellada iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay weerarkaas, isagoo sidoo kalena caafimaad u bayay intii uu dhaawaca kasoo gaaray.
"Argagaxisadu waa dhaqdhaqaaq inta badan ku kaca falal ay ku dhibaateynayaan dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan," ayuu yiri ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh oo sheegay in falkii ka dhacay Nairobi uu ahaa mid aad looga xumaado.
Madxweynuhu wuxuu hadalkiisa ku daray in ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya ay naftooda ku bixinayaan sidii ay u soo celin lahaayeen nabadda iyo ammaanka Soomaaliya, isagoo sheegay in falalka argagaxiso ee noocan oo kale ah aysan xagal-daacin doonin howsha ay ciidamadaas ka hayaan Soomaaliya iyo sidoo kale xiriirka labada xukuumadood u dhexeeya.
Sidoo kale, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu hoosta ka xariiqay in xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed ay tusayaan kalsooni adag walaalahooda Kenya xilligan ay ku jiraan murugada Qaran.
Ugu dambeyn madaxweynuhu wuxuu hadalkiisa kusoo afjaray: "Dhab ahaantii, falkan argagaxiso ma ahan mid dib u dhigaya dadaalka ay ku jiraan shacabka dalka Kenya iyo dowladdooda."
Ma jirto cid sheegatay inay mas'uul ka tahay weerarka lagu dilay dadka shacabka ah ee la socday gaariga rakaabka qaada, waxaase saraakiisha Kenya ay falkan ku eedeeyeen Xarakada Al-shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya.